Thu, Apr 26, 2018 | 21:18:09 NST
साइकोनलाई साइकल कम्पनी भन्ने बुझ्दा पानी जहाजको पाता बनाउनु पर्‍याे म अहिले ३४ वर्षको भएँ । तीन जना छोरीसहित मेरो पाँच जनाको परिवार छ । तर परिवारको खर्च चलाउने कुनै माध्यम थिएन मसँग । तीन जना छोरीलाई पढाउने पैसा पनि भएन । त्यसैले परिवारको खर्च जुटाउन र छोरीहरुलाई पढाउन २०६५ सालमा मलेसिया गएँ । कम्पनीको नाम साइकोन रहेछ । तर हामीले साइकल कम्पनी भन्ने बझ्यौं । तर हाम्रो बुझाई गलत रहेछ भन्ने त्यहाँ पुगिसकेपछि थाहा पायौं । त्यहाँ हामीले पानी जहाजको पाता बनाउनु पथ्र्यो । हामीलाई महिनाको न्युनतम तलब पाँच सय ४१ रिगिंट थियो । कम्पनीले पछि बढउछु भनेर आश्वास... पुरा पढ्नुहोस
रिंगिटको भाउ घट्यो, असुरक्षा बढ्यो त्यसैले अब मलेसिया जान्न पहिलो पटक मलेसिया पुग्दा घरमा भित्रिएकी नयाँ दुलही जस्तै अलमलमा परेको थिएँ । पहिलो पटक घर छाडेर हिँडेको मलाई विदेश भनेपछि त के के न होला जस्तो लाग्थ्यो । त्यसैले त यहाँ गर्दै गरेको काम छोडेर विदेश जाने सुर गरें । २०६० सालसम्म बिस्कुट फ्याक्ट्री चलाइरहेको थिएँ । तर माओवादी द्वन्द्व चर्किएपछि बन्द गरें । त्यसपछि मलेसिया गएँ । मलेसियामा शनिबार र आइतबार बिदा हुँदो रहेछ । म शनिबार नै पुगेको थिएँ । एक दिन एक रात म एयरपोर्टमै बसें । कम्पनीका मान्छे लिन नआएको मलाई मात्रै होइन रहेछ । २२ दिनदेखि क... पुरा पढ्नुहोस
ओमानमा साहुले मारेर जङ्गलमा फाल्छु भन्छ, कसरी फर्किनु नेपाल गएको ८ महिनादेखि ओमानको सुब्री भन्ने ठाउँमा स्थानीय ओमानी नागरिकको घरमा कार्यरत छु । रोजगारीका लागि दुवई भनेर आएपनि मलाई दलालले ओमानमा ल्याईपुर्‍याएका हुन् । मेरो घर सुलुखुम्बुको सावा र माइत ताप्लेजुङ हो । ५ वर्ष पहिलेदेखि कुवेतमा घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्थें । म खास रोजगारीका लागि घरेलु काममा दुवई जान चाहेकी थिएँ । तर मलाई दलालले ओमानमा ल्याएर विचल्लीमा पारेका छन् । नेपालबाट पठाउने मेनपावरको नाम थाहा छैन । तर मलाई यहाँसम्म ल्याउने दलाल गोपाल ढुंगाना, रबि राई र सोनाम मगर हुन् । उन... पुरा पढ्नुहोस
छुट्टीमा घर जाँदाकाे खुसी र फर्किने बेला छोराले बाटो छेक्दाकाे पीडा lsquo;परदेश’ शब्द आफैंमा यति धेरै दर्द र पीडा दिने हुन्छ कि जस्ले प्रत्यक्ष जीवनमा भोगेको हुन्छ त्यस्लाइ थाहा हुन्छ । परदेश कसैको रहर नभएर बाध्यता हो । म पनि यस्तै वाध्याता र विवस्ताका बाबजुद परदेशिएको हुँ । जन्म भूमी नेपाल बाट कयौं क्षितिज छिचोल्दै बिगत १० बर्ष देखि युएईको अबुधाबीमा कार्यरत छु । आफ्नो घर परिवार जीवन सङ्गिनी अनि मुटुका टुक्रा सरि लाला बाला र जन्म भूमी छोडेर यो प्रचण्ड गर्मीमा मैले १० बर्षमा भोगेका तिता अनुभव शब्दमा उतार्न सक्दिन । छुट्टी जाने दिन गनेर खुशी हुँदै ... पुरा पढ्नुहोस
​विदेश पुगेपछि अप्ठ्यारो परे पनि कहाँ भन्ने बित्तिकै फर्किन सकिन्छ र ? म पहिला साउदी गएको थिएँ । तर धेरै नेपालीको जस्तै फेरि पनि विदेश नगई नहुने बाध्यता मलाई पनि पर्यो । त्यसैले म अल सेक्युर म्यानपावरबाट मलेसियाको अल्पनाइन कम्पनीमा इलेक्ट्रोसियनको काममा गएँ । मसँगै अरु १२ जना नेपाली गएका थियौं । उसले ९५ हजार रुपैयाँ तिर्यौं तर रसिद चाहिँ ३५ हजार रुपैयाँको मात्रै दिएको थियो । उसले त्यो कागज श्रममा देखाउनु भनेको थियो । म्यानपावरले यहाँ त धेरै थरि आश्वासन दिएको थियो । म्यानपावरले महिनाको ९ सय रियाल बेसिक भनेको थियो । एसीको काममा जाँदा एसी भित्रै काम गर्नुपर्छ भ... पुरा पढ्नुहोस
हाम्रो रेमिट्यान्स र लास मात्रै गन्ने कि, जोखिमतिर पनि ध्यान दिने सरकार ! देशमा धेरै खालका व्यवस्था फेरिए, अवस्था फेरिएन । अनि, विदेशमा काम गर्ने श्रमिकका व्यथा पनि फरिएनन् । बेरोजगार व्यक्तिको मात्रै समस्या होइन, यो त देशकै मुख्य समस्या हो । आज जोसिला र बलिया युवा विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् । श्रमको उचित मुल्यांकन आफ्नै भूमिमा हुन्थ्यो भने परिवारसँग रामाउदै आफ्नै काम गर्न कसलाई मन नहोला र ! देशको राजनीतिक, भौतिक र आर्थिक जस्ता विभिन्न कारणले उत्पन्न समस्या भनेको बेरोजगारी नै हो । बेरोजगारी भएपछि आफ्नो खुसी बिर्सिएर पसिना बेच्न विदेश पलायन हु... पुरा पढ्नुहोस
विकसित भनिएका देशका मानिससित दयामाया हुँदैन बिहान चिसो हावा चलिरहेको थियो । मानिसहरु रातीको ड्युटी सकेर फर्किरहेका थिए । म पनि काम सकेर घर फर्किदै थिए । बिहानको ड्युटीका लागि दौडधुप पनि चलिरहेको थियो । बिहान ५ बजेको थियो । रेल स्टेशनतिर लम्कदै थिएँ । रेलको टिकेट काटिरहेका एक जना मानिस अचानक भुईंमा पछारियो र रगत छाद्न सुरु ग¥यो । उसको शरीर कामिरहेको थियो । मान्छेहरुको आवातजावत बाक्लै थियो । तर कसैले लडिरहेको मानिसलाई उठाउने त के छुने कोशिष गरेनन । आफ्नै सुरुमा कुदिरहेका धेरैले त उनीतिर हेर्दा पनि हेरेनन । केही समय ... पुरा पढ्नुहोस
‘महिनाको ७ हजार मात्रै बच्छ भने किन विदेश जानु ?’ मेरो ५ छोरी, एक छोरा अनि श्रीमतीसहित ७ जनाको परिवार छ । परिवार ठूलो भएपछि उनीहरुको खान लाउने मेलो नहुँदा खाना नाना र छोराछोरीको पढाई खर्च जोहो गर्न म २०६८ सालमा भारतको पन्जाब गएँ । पञ्जाबको कमाईले मेरो परिवारलाई खान लाउन पनि पुगेन । यस्तो पाराले त केही हुँदैन भन्ने लाग्यो ।त्यसैले २०७० सालमा सिधै म्यानपावर मार्फत फोरमेनको काममा एक लाख रुपैयाँ तिरेर म मलेसिया गएँ । मलेसियामा मेरो तलब ४ सय ४६ रिंगिट थियो । काम चाहिँ १२ घण्टा गर्नु पथ्र्यो । पद चैं फोरमेनको तर कम्पनी जे काम लगाएपनि गर्नुपर्थ्यो । ... पुरा पढ्नुहोस
​श्रीमान विदेश जाँदा लिएको ऋण तिरिसकेपछि फजुल खर्च गर्थें तर गलत रहेछ म, श्रीमान अनि दुई जना छोरीसहित मेरो ४ जनाको परिवार । श्रीमानले नेपालमै केही काम गरेर यतै केही गरौं भन्ने पनि सोच्नुभएको थियो । तर काम गर्दा पनि पैसा बचाउन सक्नुभएन् । त्यसैले उहाँ मलेसिया जानुभयो । उहाँ विदेश गएदेखि म छोराछोरीलाई लिएर रुपाकोट मझवागढी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा बसिरहेको छु । मेरो श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा गएपछि ऋण काडेर गएको हुनाले ऋण तिर्नतिर लागिउँ । ऋण तिरिसकेपछि त पैसा किन चाहियो जस्तै लाग्यो मलाई । त्यसैले महङ्गो कपडा र छोराछोरीलाई धेरै खर्च गर्न थालें । उनीहरुले जे ... पुरा पढ्नुहोस
४० कटेपछि रमाउँला भनेको ५० काटिने भइयो युवाको मेहेनत र लगनको रेमिट्यान्सले देश चलिरहेको छ भन्ने खबर आइरहेको छ । जुन खबर हामीले पनि पढिरहेका छौं । देशको अर्थतन्त्रमा परदेशीको योयदान ठूलै छ तर परदेशीको यो कामलाई देशको सेवा मान्दैनन् धेरैले । कहिले काहिँ त नेताहरुबाटै पनि यस्तै कुरा सुनिन्छ । कि सरकारलाई पनि यो कुरा थाहा छैन र ? सुरुमा दुई वर्षलाई भनेर विदेशिने युवाका धेरै वर्ष परिवारका लागि केही गरौं भन्ने आशै आशमा बित्छ । हामीले यो परदेश बसाईमा आफू र आफ्नो परिवारका लागि मात्रै होइन देशका लागि पनि त गरिरहेका छौं । यही सो... पुरा पढ्नुहोस
आमा बनेर घर चलाउन गाह्रो रहेछ ६/७ महिना अघिसम्म मेरो काम घर बाहिरको हुन्थ्यो अनि श्रीमती सुकमायाको घरभित्रको । उनको दिन खानपान बनाउनेदेखि छोरीको स्याहारमा बित्थ्यो । तर अहिले त अवस्था फेरिएको छ । उनी विदेश गएको ७ महिना भयो । त्यसपछि त अहिले छोरीका लागि म नै बुवा अनि म नै आमा भएको छु । व्यवहारिक रुपमा आमाको भूमिका निर्वाहा गर्न ग्राहो हुने रहेछ । मैले पहिला आफूले कमाउन सकुन्जेल महिलाको काम पकाउने र खुवाउने मात्र हो जस्तो लाग्थ्यो । किनकी मैले कमाएर ल्याउँथे । तर पैसाले मात्रै परिवार चलाउन सकिने रहेनछ । आमा भएर घर चला... पुरा पढ्नुहोस
​साउदीमा ठगिएर फर्किएपछि सचेत समूहको अध्यक्ष भएँ आज भन्दा १६ वर्ष अघि । त्यति बेला पैसाको भाउ कति थियो होला सोच्नुस् त । मैलै भन्न खोजेको त्यतिबेलाको ८५ हजारले अहिलेको २ लाखको जत्तिकै काम गर्थ्यो । हो त्यही बेला मैले ८५ हजार रुपैयाँ तिरें साउदी अरव जान । अहिले जस्तो सीप तालिम सिकेर जाने, सूचना पाउने ठाउँ थिएन । के गर्ने लाटो समय । हामीलाई ठगेपनि एजेन्ट त भगवान जस्तै लाग्थ्यो । त्यही भगवानले ८५ हजार रुपैयाँ भन्दा एक पैसा पनि घटाउन मानेन । नमानेपछि के गर्नु भनेर तिरेर गएँ । तर न यहाँ भनेको काम पाएँ न त तलब नै । कम्पनी नै गतिलो थिएन ।... पुरा पढ्नुहोस
हातका औँला त बराबर छैनन् भने परदेशिएको छोरा सम्झेर के मन दुखाउनु ? खौ के भनौं ? आजभोलि मलाई जीवन प्यारो लाग्न थालेको छ । रमाईलो लाग्न थालेको छ । म अलिक लोभी भएको छु जीवन भोगाइको क्रममा । तर चार महिना अघिको अवस्था सम्झिँदा अहिले पनि मेरो शरीर सिरिङ्ग हुन्छ । पैसा कमाउन गएको छोरा मलेसियामै रमाए पछि उसले अनौठो व्यवहार देखाउन थाल्यो । मलेसियाबाट चार पाँच महिनामा फोन गथ्र्यो । त्यो पनि फरक फरक नम्बरबाट । त्यै पनि मलाई होइन बुहारीलाई मात्रै गथ्र्यो । मेरो इच्छा चाहिँ छोराले मसँग पनि फोनमा कुराकानी गरिदियोस, विदेशमा बस्ने उसको हालखबर कस्तो छ भनेर सुनाइदियो... पुरा पढ्नुहोस
हामी परदेशीले कहिलेदेखि देशमा ठाउँ पाउँछौं ? हामी युवा नेपालमा किन अटाउन सकिरहेका छैनौ ? जबकी हाम्रै देशमा एउटा भनाई चर्चित छ, ‘युवा शक्ती देशको मेरुदण्ड हो ।’ तर युवालाई देशमा राख्न केहि गरिंदैन । त्यस्ता योजना आउन सकेका छैनन् । परदेशको पीरले कतिपय युवा जबर्जस्ती नेपालमै बस्छु, केही गर्छु भनेर नेपाल फर्किन्छन् । तर सधैंको बन्द हड्ताल, चक्काजाम, विभिन्न समुहको चन्दा आतंकले देशबाट लखेटिन वाध्य बनाउँछ । अनि लगानी डुबाएर घरद्ध बर्ष छाडेर फेरि म्यानपावर धाउन थाल्नुपर्छ । अनि म्यानपावरले पनि तिनै युवालाई लुट्छन् । सरकारका क... पुरा पढ्नुहोस
​तपाईंसँग सीप छ ? विदेशबाट फर्किए पनि काम पाईंदैन भन्नै पर्दैन म अहिले त काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिका–१६ फुटुङको स्थायी बासिन्दा भएको छु तर पुरानो घर रामेछापको सुकाजोर गाविस–१ रजयछाप हो । २०५७ सालमा पुख्र्यौली थात थलो रजयछापमा भविष्य उज्वल नहुने देखेपछि पुर्खौली थलो छोडेर नव बिवाहित दुलहीलाई साथमा लिएर काठमाडौं छिर्दा मसँग गोजीमा ५० रुपैयाँ मात्र थियो । उमेरले ४३ वर्ष टेके पनि मसँग काम गर्ने जोस जाँगर थियो तर पढाइलेखाई थिएन । त्यसैले जागिर पाउन सजिलो थिएन । र पनि मलाई आफू र श्रीमतीको ज्यान त कुल्ली काम गरेर भएपनि पाल्छु भन्ने थियो । यही आ... पुरा पढ्नुहोस
​आम्दानी र खर्च मिलाउन सके विदेश गएकाका परिवार ऋणले आत्तिनै पर्दैन मेरो श्रीमान वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा अहिले कतारमा हुनुहुन्छ । उहाँ विदेश जाने बेलामा हामीसँग पैसा थिएन । त्यसैले हामीले ८० हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थियौं । ऋण लिएर विदेश गएकाहरुले अरु जस्तै हामीलाई पनि सुरुमा त ऋण कसरी तिर्ने होला भन्ने चिन्ता थियो । फोनमा पनि श्रीमान र मेरो यस्तै गफ हुन्थ्यो । तर अहिले हामीलाई यस्तो तनाव छैन । बालसेवा समाज नेपाल नेर्पा खोटाङद्वारा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) अन्तर्गत चिउरीडाँडा गाविस वानाचुङमा भएको वित्तिय समूहमा आवद्ध भएपछि मैले यसको उपाय... पुरा पढ्नुहोस
जनकपुर र काठमाण्डौंमा फिट भएको म कतारमा किन अनफिट भएँ सरकार ? जवाफ चाहियो मेरो घर सर्लाही जिल्लाको संग्रामपुर गाविसमा छ । म गरिब परिवारको सदस्य हुँ । गाउँका धेरै मान्छेहरु विदेश गएपछि मैले पनि विदेश जाने सोच बनाएँ । घर परिवारसँग सल्लाह गर्दा सबैले सहमति जनाउनुभयो । अनि म विदेश कसले पठाउँछ भनेर गाउँतिर बुझ्न गएँ । मेरो भेट हरिपुर्वाका ललिन्द्र राय यादवसँग भयो । उनले मलाई विदेश पठाईदिन्छु भनेर काठमाडौंको गौशालामा रहेको मिथिला म्यानपावरमा सम्पर्क गराए । म्यानपावरले मसँग सबै कुरा बुझ्यो र मसँग पासपोर्ट लियो । भिसा आएपछि एजेण्ट ललिन्द्रले मेडिकल रिपोर्ट ल्याउनु भन्यो... पुरा पढ्नुहोस
बेलायत जाने चक्करमा बेचेकाे घर उकास्न साउदी म साइबर चलाएर खुसिका साथ नेपालमै बसेको थिएँ । आम्दानी राम्रो नभए पनि कसैको अन्डरमा बस्न नपर्ने र परिवारसँग बसेर सामान्य तरिकाले जीवन बित्दै थियो । एक दिनको कुरा हो । जब म इमेलमा च्याट गर्दै गर्दा म्यासेन्जरमा अचानक नचिनेको मान्छेको म्यासेज आयो । सामान्य हाई हेल्लो पछि उसले आफ्नो परिचय दिन थाल्यो । उसले भन्यो ‘मेरो नाम चर्चिल पिङ्टोन हो । म अमेरिकामा बस्छु । यहाँ साततारे होटेल छ । जस्को नाम हो ओल्ड बेलि होटल, म यसको मेनेजर हुँ ।’ मैले पनि भारतको राची भन्ने ठाउँमा ... पुरा पढ्नुहोस
म्यानपावरले नेपालकै एयरपोर्टमा च्यात्नु भनेको कागजात नै हाम्रो हतियार भयो २०५९ सालमा एसएलसी पास गरेपछि घरमा जिम्मेवारी थपियो । त्यसैले घरको जिम्मेवारी पूरा गर्न कमाउनका लागि भारत गएँ । गाउँका दाइहरु पनि त्यही भएकाले काम पाउन गाह्रो भएन । तर त्यहाँको कमाइले आफुलाई खान लाउन मात्र पुग्ने भएकाले विदेश जाने सोच आयो । यो सोचले मलाई एउटा मात्रै होइन चार वटा देश घुमायो । म युएई, कतार, मलेसिया र साउदी अरब गएँ । यी चारमध्ये सबै भन्दा अविस्मरणीय यात्रा चाहिँ कतार जाँदाको रह्यो । त्यो पनि दोस्रो पटकको यात्रा । पहिलो यात्राले धेरै कुरा सिकाए पनि अप्ठेरोमा पर्दैन भन्ने जस्तो ल... पुरा पढ्नुहोस
परदेशमा कसलाई विश्वास गरौं ? भेंटे मैले मुटुमा धारिलो छुराले रोपेर के छ खबर भन्नेहरु यहाँ सधैंभरी आफू मात्र भोका तिर्खा बन्नेहरु यहाँ सबै किसिमका साथीहरू भेटिन्छन् विरानो परदेशमा कोही दलाल त कोही काममा लगाई दिन्छु भन्दै ठग्ने फटाहाहरु यहाँ विश्वास पनि कसरी गरौँ नेपालीले नेपालीलाई लुट्छन् दुई चार सय रिंगिट बोकेको सुइँको पाए भने स्थानीय नागरिकलाई लुट्न र कुट्न नेपालीले नेपालीलाई लाउँछन यहाँ नेपालीको दुःखमा कठै भन्ने कमै भेटिन्छन नत्र सबै लुटेरा जस्ता देखिन्छन घरका बुढा बुवाआम... पुरा पढ्नुहोस
ओमान ओमान खाडी मुलुकहरुमध्येमा पहिलो स्वतन्त्र राज्य हो । खाडी क्षेत्रका परम्परागत देशहरूमा ओमान पनि पर्द... थप जानकारी